မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXIII
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXIII
၁၁၊ ကမ႓ာ့ရာသီပြောင်းရခြင်းဟာ ဂျီဒီပီ က တရာခံလို့ ဆရာဦးထွန်းလွင်ကပြောပါတယ်၊
ကြွယ်ဝချမ်းသာအောင် လူတွေက ကာဘွန်ပိုသုံးလာလို့ ကမ႓ာ့ပူနွေးမှု တိုးလာကြောင်း
ပြောပါတယ်၊ (ရှေ့ဆောင်းပါး # ၂၂)
ဂျီဒီပီ တိုးအောင် ရေကာတာလုပ်တဲ့အခါမှာ ကမ႓ာ့ပူနွေးမှုကိုထဲ့စဉ်းစားဘို့လိုအပ်ကြောင်းပြော
ပါတယ်၊ဒါကြောင့် ဧရာဝတီ ရေကာတာ ရ လုံးကို လုံးဝရပ်ဘို့ဆရာကြီးကပြောပါတယ်၊
တော်တော်ခေါင်းခဲ တဲ့ အလုပ်ပါ၊မြန်မာပြည်ရဲ့ဆင်းရဲတွင်းမှထွက်ရပေါက်လေးကိုပိတ်
ဆရာတို့Green Network တို့ International Rivers တို့ ကိုမေးလိုတာကတော့ ဒီလိုပါ၊
၇၅၀၀ဝ မှ ၈၀၀၀ဝ ထိ ရေကာတာ လုပ်ပြီးတဲ့အမေရိကန် ကိုဘာဖြစ်လို့သွားမတားတာလဲ?
ရေကာတာထောင်ချီရှိတဲ့ အီးယူ၊ ယူကေ၊ပြင်သစ်၊ဂျာမဏီ၊ အိန္ဒိယ စသည်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့
မြစ်ကောမယ် လူ တိရိစာ္ဆန် ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာလေ၊ သူတို့ဆီက မြစ်ကောလို့လူသူတိရိစာ္ဆန်
ဓာတ်ပုံတွေရှိရင်လဲ “မျှ” ဝေ စေလိုပါတယ်၊ဘာကြောင့်မပြနိုင်၊ မပြချင် တာလဲဆရာ ဆရာမတို့ရေ?
အမေရိကန်မှာရေအားလျှပ်စစ် ၅ဝ % ထပ်တိုးအုံးမယ်၊ရေကာတာတွေမဖျက်ဘဲမွမ်းမံတိုးချဲ့အုံးမယ်၊
အသစ်တည်ဆောက် အုံးမယ်ဆိုတာ ကမ႓ာ့ပူနွေးမှုအကြောင်းတရားသွားဟောပေးပါအုံး၊ဘာဖြစ်လို့
“ကုလားမနိုင် ရခိုင်မဲ (မေး)” ဖြစ်မနေဘူးလားဆရာ ဆရာမ တို့?
လျှပ်စစ်ခ နှုန်းထား နဲနဲလေးတိုးလာတာတောင် မတတ်နိုင် တဲ့ ပြည်သူကိုမငှဲ့ဘဲ၊ဈေးကြီးတဲ့
နေအား လျှပ်စစ်၊လေအား လျှပ်စစ်တွေကိုသုံးဘို့ သူဌေးသား လို ခပ်လွယ်လွယ်ပြောတတ်ကြတယ်၊
ဒီပေကြိုးမျိုးနဲ့ အနောက်နိုင်ငံကို ယခင်ကလဲအကြပ်မကိုင်၊ခုလဲမကိုင်၊နောင်လဲကိုင်မှာမဟုတ်ပါ၊
ဖွံ့ဖြိုးစ မွဲတေတဲ့နိုင်ငံကြတော့ ဒီပေကြိုးနဲ့ လာအကြပ်ကိုင်တာက မတရားဘူးထင်ပါတယ်၊
စက်မှုလက်မှုတော်လှန်ရေး ၁၇၆ဝ မှစပြီး ခုထိ နှစ်ပေါင်း ၂၅၆ ကာလ အတွင်းမှာ အနောက်နိုင်ငံ က
မီးသွေးရေနံနဲ့လောင်စာတွေသုံးကာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကို ညစ်ညမ်း စေပြီး မှ ခုဆိုရင် ကျန်နိုင်ငံ
တွေကို ပေကျိုး အသစ်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတားနေတာပါ၊
ဝန်းကျင်ကိုလဲညစ်ညမ်းစေတယ်၊ရေအားနဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ်ရင် ဈေးသက်သာပြီး သဘာဝ
ဒါလဲလိုက်ဟန့်တားနေတာက သဘောရိုးများလား မဆီမဆိုင်ပထဝီနိုင်ငံရေးများလား၊
တန်ရာတန်ရာ လက်လှမ်းမှီသလိုမဟုတ်ဘဲ သူဌေးသားဂိုက် လိုက်ထုတ်နေတာလား မေးစရာတွေပါ၊
ကမ႓ာ့ပူနွေးမှု ဆိုတာ အလှန့်တကြားလုပ်တာ၊Donations, Grantအလှူခံ ရံပုံငွေရအောင်လုပ်တာ၊သိပ္ပံနည်းနဲ့
ခိုင်လုံအောင် သက်သေမထူပြနိုင်၊ အချက်အလက်တွေကိုလုပ်ကြံတယ်၊ခိုးပြင်တယ် ဆိုပြီး
အမေရိကန်သမတလောင်း ဒေါ်နယ် ထရမ့် ကလဲhoax (လိမ်ညာတာ) ဆိုပြီး Paris Agreement ပါရီသဘောတူညီမှု
တချိန်တုန်းက အိုဘားမားက တရုပ် ကုလားတို့ မပါလာရကောင်းလား စိတ်စိုးခဲ့ပြီး၊ခုပါလာတော့
လဲ ထရမ့်က မပါချင် တမျိုး ကြီးပါလား၊
ဆရာကြီး တို့သမတသစ် Trump ထရမ့်နဲ့ အရင်ပြောကြည့် ပါအုံးလေ ကိုယ်ကဘဲမသေမချာ ယာင်တောင်တောင်နဲ့
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းတာကလည်း သိပ်ပံပညာနဲ့ ထိန်းမှ ရတော့မှာ။ ြ